पानी कसरी र कुन समयमा पिउने ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / पानी कसरी र कुन समयमा पिउने ?
admin February 6, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 105 Views
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दिनमा ८ देखि ९ गिलास पिउनुपर्छ । पानीले शरीरमा भएको विषालु पदार्थहरुलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ । नियमित भरपुर पानी पिउँदा विभिन्न प्रकारका रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । तर पानी पिउने सही तरिका हुन्छ । जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला टन्न पानी पिएर मात्र शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सकिदैन । पानी पिउँदा सही तरिका अपनाउनुपर्छ ।
तातो खाना, काक्रो, तरबुजा, खरबुजा, मसलादार खाना, चिल्लो खाना, बदाम, तातो दूध, चिया, घामबाट हिँडेर आउनेवित्तिकै पानी पिउनु शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तै, व्यायाम गर्ने्वित्तिकै पनि पानी पिउनु हुदैन । यसैगरी, बिहान पानी पिउँदा टाउको दुखाई, मिर्गौलाको समस्या, मुटुको रोग, पाचन प्रक्रियामा सन्तुलन, कब्जियत जस्ता थुप्रै समस्याहरु समाधान हुन्छ ।
Previous यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे म रेका छैनन्, कारण थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुन्छ
Next भोलिदेखि काठमाण्डाैबासीहरूका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर